Euro 2016 : sahirana vao tafita ny National Mannschaft | NewsMada
Euro 2016 : sahirana vao tafita ny National Mannschaft
Par Taratra sur 04/07/2016
Ekipa fahatelo, tafakatra amin’ny lalao manasa-dalana, ny National Mannschaft avy any Alemaina, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Euro 2016”, taranja baolina kitra. Nivoaka sempotra tanteraka anefa ry zahaly vao nandresy.
Tany amin’ny fandakana ny “tirs au but” 6 noho 5, vao nahazo ny tapakila hiakarany amin’ny manasa-dalana ny Alemà, eo amin’ny fiadiana ny “Euro”. Nivoaka sempotra tanteraka ry Rainiboto, nanoloana ny Italianina, ny asabotsy lasa teo, tao amin’ny kianja Bordeaux. Efa tany amin’ny mpandaka fahasivy, vao afaka tanteraka ny National Mannschaft.
Tsy nisy fotoana nisotroana rano mihitsy mantsy ny fihaonan’ny roa tonta fa tena gidragidra, hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany. Nisaraka ady sahala 1 sy 1 ny fihaonana, tao anatin’ny 90 mn nilalaovana sy ny fanalavam-potoana 15 mn, indroa miditra.
Tsy nisy nahatafiditra baolina, ny andaniny sy ny ankilany, teo amin’ny tapa-potoana voalohany, na dia samy nanao izay ho afany aza.
Na izany aza, ny Alemà no nanokatra ny isa, tamin’ny alalan’i Ozil, teo amin’ny minitra faha-65, rehefa nahazo tolotra tsara avy amin’i Kimmich. Very tanteraka i Buffon, mpiandry tsatoby.
Nitarika tamin’ny isa teo ny Mannschaft, saingy tsy nionona tamin’io isa io fa vao mainka nanindry sy nifehy ny lalao ry zalahy, nefa tsy nisy intsony ny baolina tafidiny.
Nanome kadoà i Boateng
Efa tsy nihevitra ny ho afaka intsony ny Italianina, izay tsy dia nahavita nanafika firy intsony, taorian’io baolina tokana matin’ny Alemà io. Nitranga nefa ny tsy nampoizina teo amin’ny minitra faha-78, taorian’ny corner azon’izy ireo. Voadonan’ny tanan’i Boateng tsy nahy tao anatin’ny faritra tsy azo ivalozana ny baolina ka tsy nisalasala ny mpitsara nanondro ny teboky ny “penalty”. Maty izany, rehefa nodakan’i Bonucci teo amin’ny minitra faha-78. Azo lazaina fa nanome kadoà, ho an’ny Italianina i Boateng tamin’izany. Somary nanindry indray ny Italianina, taorian’io saingy tsy nisy baolina tafiditra intsony.
Efa niandry ny fandakana ny “tirs au but” fotsiny sisa ny Italianina, raha mbola nikiry nitady hamonoana baolina ny Alemà.
Hanokatra ny lalao manasa-dalana, ny alarobia ho avy izao i Portugal sy Pays de Galles.